Amna Dukkanaa’aa: Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa | Journey in the dark: Oromo’s untold story in Eritrea | Fighting for Freedom and Equality
Amna Dukkanaa’aa: Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa | Journey in the dark: Oromo’s untold story in Eritrea
Posted by Gishe Abdi Wako on May 14, 2013
May 13, 2013 at 8:33 pm · Gadaa.com
– Click Here to Read the English Version
T.F YKN Addaamuu | Nairobi Keniya irraa
Innis ani duraanuu isinitti himeera, ammas balballi keenya isiniif banaadha, qabsoon gaggeessinus qabsoo ummataa waan taheef nu waliin hiriiruuf fedhii yoo qabaattan wanti isin dura dhaabbatu hin jiru jedhee mana hidhaatii nu yaase. Haa tahu malee mana hidhaa keessaa baanullee kallattiin gara ilmaan Oromoo warra ijaarameetti hin makamne turre. Akka kanaan duraa mana hidhaallee tahuu baatu, waraana isaanii warra kaadhimamaatti nu makanii hojii humnaatti nu bobbaasan. Ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessaa baane akka walitti dhufnee hin maryanneef adda addaa jaarmiyaa keessa nu facaasan.
Bakka dalagaatti walitti dhufnee yoo wal haasofne, afaan Oromoon wal haasawuun dhorkaa akkka tahe nu akeekkachiisan. Dhaaba Oromoo qofa osoo hin taane, dhaaba sabaa fi sab-lammootaa biroollee ijaaraa akka jiran hubadhe. Torbanitti guyya tokko sagantaa sabaa fi sab-lammootaa jechuun qophii qopheessuu eegalan. Afaan waltajjii san irratti hayyamamu afaan Amaaraa qofa tahe. Sanaan alatti afaan Tigirinyaa barachuunis dirqama akka tahe nutti himan.
Gara yaada kiyya jalqabaatti oggaan deebi’u anis suuta suuta amanamaa fakkaadhee dhihaadhe. Qondaalonni isaanis natti dhihaatanii waan tokko tokko natti himuu eegalan. Suuta suuta akkaataan achi keessaa bahee miliquu danda’u irratti qorannoo kiyya itti fufe. Waa’ee ABOs suuta gaafadhee jennaan kallattii waraanni TPDM jiru irraa fagoo akka jiran dhagahe. Haala kanaan achii badee ABO argachuu caala gara Sudanitti qajeeluun akka irra salphaa tahe hubadhe. Guyyaa tokko akkuma tasaa gaggabee kufe. Dhuma irratti dhukkubni garaa kaasaa akka na qabe himadhe. Kanaaf halkan yeroon fedhetti akkan fincaaniif gad bahu naaf hayyaman. Waraana mootummaa keessaas waan hin turreef gammoojjii kana
keessaa baduu hin danda’u jedhanii yaadan. Anis halkan tokko yeroo 10 bahee deddeebi’e. Namni akka na hordofaa hin jirre mirkaneeffadhee halkan lammaffaatti koddaa kootti bishaan guuttadhee halkan keessaa gara sa’a 2 fi walakkaa irratti deemsa kiyya eegale. Ogguu lafti barii’u daangaa mureen waraana Sudaanitti harka kennadhe. San booda mooraa baqataa Shagaraab jedhamutti na geessan. Achi taa’een firoota kiyya biyya ambaa jiran quunnamee maallaqa naaf ergamii torbaan lama booda gara kaartum qajeele. Ani jireenya baqattummaa hawwees hin beeku, kaniin manaa baheef qabsoo waan taheef gara Kaartum deemee caasaa ABO quunnamuuf murteeffadhe.
Yaada koo guduunfuun dura ammas irra deebi’ee kaniin jedhu, hogganoonni Shaabiyaa, barri itti wal gaafannu ni jiraati, nurraa dhaabbadha, kan kanaan nu gahes isinuma ammallee adeemsi amma itti jirtan fala isiniif hin tahu dhaabbadhaa, imaammata keessan keessa deebi’aa ilaalaa jechuun barbaada.
Dargaggoonni Oromoos yoo qabsoo barbaaddaniif biyyuma keenya keessatti haa hojjannu. WBOn kallattii maraan jira, caasaan ABO bal’aan biyya keessa jiraati biyyuma keenya irratti qabsoo keenyatti haa jabaannu isiniin jedha.
T.F YKN Addaamuu Nairobi Keniya irraa
← Ethiopian Journalists Hope New Council Will Ease Restrictions
Oromo English Conversation AccommodationI am looking for a hotel →
2 comments on “Amna Dukkanaa’aa: Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa | Journey in the dark: Oromo’s untold story in Eritrea”
kaasuu mul'isaa on March 23, 2014 at 8:56 am said:
Bu’i ba’ii akkasii keessa dabartee abdiidhaan turtee bakka qabsaa’anii itti bilisummaa argatan uummata keef caqasun kee baayyee na gammachiisa.ulfaadhu!
Gishe Abdi Wako on March 26, 2014 at 10:11 pm said:
attis galatomi jabadhuu bilisuman umata oromof!